Shariif Sheekh Axmed ma u Hanbeeyey Maxamed Macallin Diin Dambe oo lagu Qaraabto! Caamaduna Xaflado Caleemo-saar ma Daayaan, Wadaaddada Qaarkoodna Cimaamad-saar Xisbi! | News From Somalia
Shariif Sheekh Axmed ma u Hanbeeyey Maxamed Macallin Diin Dambe oo lagu Qaraabto! Caamaduna Xaflado Caleemo-saar ma Daayaan, Wadaaddada Qaarkoodna Cimaamad-saar Xisbi!
Horay waxaan u sheegay in dadkeenna Soomaaliyeed intooda badan aan waalannahay! Laga soo Bilaabo Koonfur Afrika ilaa Norway waxaa is qabsaday xaflado caleemo-saar ee loo dhigayey Xasan sheekh Maxamuud! Waxaan horay u sheegay in dadku yahay isla dadkii xafladaha u sameyn jiray C/Qaasim, C/Laahi Yuusuf, iyo Shariif sheekh Axmed! Asbuucyo gudahood baad arkeysaa isla dad sheeganayey inay ku faraxsanaayeen caleemo-saarka madaxweyene oo iyagu u hor bilaabaya caydiisa!
Waxaa dadkaas igala caqli xun Maxamed Macallin iyo hadday jiraan cid la ixtiraamo oo la qabta fikraddaas ah inuu Xisbi aasaasayo! Waxaad is leedahay, Soomaalidu, kama faa’iiddo dhacdooyinka iyo waqtiga! Miyaan wadaadku ku cibro qaadan Shariif sheekh Axmed, Janaqoow, C/Qaadir Cali Cumar, Indhocadde, iyo kuwo kale? Mise wuxuu aaminsan yahay in haddii qof gooni wax sheegto in la iska dabo galayo?
Ma Dad Mujaahidiin loo Heysto baa fikraddaas ku Weheliya Maxamed Macallin?
Horta hadday arrintu ka socoto Maxamed Macallin keligiis xiiso ma leh oo kama duwana khudbooyinkii ay nagu hor akhriyeen nimankii sheeganayey inay u tartamayeen madaxweynayaasha! Waxay arrintu xiiso yeeleysaa hadday meesha ku jiraan niman Mujaahidiin loo heyso oo marka xaaladdu kululaato isa soo dhiiba! Xaqiiqdii, hadday jirto cid Shabaab ka soo goosata; waxaan shaki lahaan doonin inay ka sii liidan doonaan Shariif sheekh Axmed iyo saaxiibbadiis sababo la wada fahmi karo owgood! Waxayna ku dambeyn doonaan dulli adduun; aakhirana wax uma yaallaan niman khiyaamay diintii Ilaahay iyo dadkeeda. Hadday jiraan dad noocaas ah waqtigeedaan u deystay haddii Ilaah idmo.
Ma Isu-soo-dhiibka Gaaladaa Noqday mid Shareeco lagu Keeno?
Maa isyeelyeelka la iska daayo? Soow Suubbanuhu (SCW) ma oran:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء
Lama soo koobi karo Nasuusta ka hadasha arrimahaas. Maxay tahay qariibnimada ka daran haddaanba la heyn hal waddan oo ha u yaraado sida Jabuuti ama Kuweyt oo Shareeco isku xukuma? Kama hadlayo gobollada ay Mujaahidiinta Adduunku joogaan. Soo Axaaddiis ma sheegin in umaduhu iskugu keen yeeran doonaan? Muxuu Nabigu (SCW) ku sheegay in dulliga looga baxayo? Ma in la adkeysan waayo mise in loo noqdo Diinta iyo Jihaadka?
Ninkii u heystay in gaalo kula heshiineyso ama ku soo dhoweyneyso adoo Shareeco-doon ah waa nin khaldan. Teeda kale maxaa Nabiga (SCW) laga dhaxlay? Waxyaalaha Nabiga (SCW) laga dhaxlay waxaa ka mid ah kuwooda ugu waaweyn Jihaadka iyo adkeysiga! Miyuusan Suubbanuhu (SCW) Makah lagu dhibin? God soo gelin? Jihaad lagu dhaawicin? La go’doomin? Shirqool lagu dilo loo dhigin? Waddadaas qofkii mara baa dadka ugu dhow!
Hadday jiraan niman adkeysan waayey oo xukun-doon ahaa oo ku dhex jiray Mujaahidiinta waa dad u dhaqmaya sida laga sheego Ya’juuj wa Ma’juuj. Waxaa jira Xaddiis ay wariyeen Imaamu Axmed, Tirmidi iyo qaar kale oo Xaakimna saxiix ka dhigay oo ay ku jirtay in Nabigu (SCW) yiri: in markay Ya’juuj wa Ma’juuj teedka soo qodaan oo in yar u hartay ay dhahaan: na keena berri baan dhameys tireynnaa ka dhex baxiisa iyagoon oran haddii Ilaah idmo kaddibna ku soo noqdaan subaxa ku xiga teedkii oo halkiisii ku noqday ilaa la gaaro waqtiga Ilaah doono inay soo baxaan oo ay dhahaan: berri baan u soo noqon doonnaa haddii Ilaah idmo.
Waxaan uga dan leeyahay, ma waxaa jira wadaaddo aan weli ku cibro qaadan Shariif sheekh Axmed iyo saaxiibbadiis? Wadaaddo u qaba in hadday gaalada hoos galaan la dhihi doono: waa Mujaahidiintii ee soo dhoweeya? Xaqiiqdii, waa ka sii liidan doonaan Shariif sheekh Axmed! Hadduu jiro wadaad fikrad ku raacsan Maxamed Macallin waxaa u fiican inay wacaan Shariif sheekh Axmed oo dhahaan: maxaad ka keentay madaxweynanimo lala hoos galo gaalo? Waxaan shaki iiga jirin in Shariifku jeclaan lahaa inuu macallinkuu ka ahaa iskuulka iska ahaan lahaa oon cidna aqoon!
Waxaan Ilaah ka beryeynnaa inuu sugo Mujaahidiinta oon la helin qof inta samri waaya soo aada cadaab. Waxaan ognnahay in arrinta Shareeco-soo-celintu u baahan tahay kooxda loo gargaarayo. Kooxdaasi waa joogtaa laakiin wadaaddo badan siday u dhaqmayaan markaad aragtid waxaad is leedahay waxbaa dhiman! WALLAAHI, hadday jiraan dad Mujaahidiinta ku dhex jira oo u guuxaya sheekada Maxamed Macallin; waxaa caddaaneysa in la kala baxayo! Waana la fahmi karaa insha Allaah in arrimahaas oo kale daahiyaan Nasriga Ilaahay! Sidee Nasri loo helayaa haddii iyadoo Shariif, Janaqoow iyo niman kale quusteen; la helayo wadaaddo ku dhex jira Mujaahidiinta oo raba inay gaalo haddeer soo hoos galaan? Kuwaas oo kale inay ka soo dhex baxaan Mujaahidiinta waa u fiican tahay.
Wuxuu qoraalku iga yahay caqli-celin iyo talo ee kama wado inay jiraan niman la hubo oo geeddi u soo ah isu-soo-dhiibka Amisom! Dad wax kasta waa laga fishaa! Ilaahay kama dhigo laakiin hadday dhacdo WALLAAHI waxay dan ugu jirtaa Jihaadka maxaa yeelay hadday halaqyo kugu dhex jiraan horumar ma gaartid! Marka Mujaahidiintu ha ogaato inaan tiro meel lagu gaarin. Marar badan baan soo qoray in Jihaadka lala geli karo qof mabda’ leh ee aan badanaa faa’iido laga gaarin dad dano kale loo agaasimay oo dagaal la gesho. Boqollaal qof oo fahmay qaddiyadda loo dagaalayo baa ka fiican kummaankum iska ordaya oo markay xaaladdu meel halis ah mareyso ka baxa garabkaaga! Marka bal waxaa isha lagu hayaa cidda ka jawaabta hadalka Maxamed Macallin! WALLAAHI, waxaan mar kale ku celinayaa, in qofkii haddeer ka soo baxa Jihaadka uu ka sii liidan doonno Indhacadde, Janaqoow, Axmed-madoobe iyo kuwa kale!
Horay baan u sheegay in caleemo-saarka “madaxweynaha Soomaalidu” la mid noqotay sida ciyaaraha Olambikada iyo kuwa Adduunka ee afartii sanaba mar qabto loona sameeyo feestooyin! Marka ciyaar baan iskaga jirnnaa! Saasoo kale, la-yaab ma laha in la arko iyadoo wixii la ogaa ku dhaceen Shariifka iyo saaxiibbadiis in wadaaddo kale rabaan inay iskaga kaaya dhigaan guddoome xisbi Islaami ah (sida guddoomihii Midowga Maxaakimta)! Indha-adeyga Maxamed Macallin wuxuu gaaray meel sare! Hadday dani ka heyso hoostagga Amisom muxuu u raadsan waayey xubin waxa baarlamaanka lagu sheegay? Waxay isaga la tahay in sidii waagii Maxkamadaha loo soo dhoweyn doono wadaaddadaas khiyaamay diintii iyo dadkii! Saan horay u soo sheegay waxa la fiirinayo waa in dad Mujaahidiin sheeganaya soo baxaan! Haddaysan soo bixin; ma jiri doono wax miisaan ah oo uu yeelan doono hadalka Maxamed Macallin. Wuxuu la mid noqon doonaa kii wadaadka Maxamed Yaasiin ee lahaa wuxuu u tartamayaa madaxweynanimo! Marka waa iyadii madaxda Xisbigaas ahaan jirtay ka hadli jireen waxyaalo soke sidaas darteed waa inay ka jawaabaan hadalkiisa ood mooddo inuu galo dagaal ka daran kuwa idaacadaha gaalada! Insha Allaahu waqtigaan oo kale baa la kala bartaa macdanta dadka.
W/Q: Ustaad C/Waaxid C/Laahi Khaliif
This entry was posted in Ashahaado la dirir!, Banaadir Post, CRD SOMALIA, CulumoSuu, MAHIGA-UNPOS SOMALIA, Maleeshiyo Beeleed, Shariif Sheekh Axmed, Somali Media, Somalia, Umul iyo Ictisaam and tagged Ashahaado la dirir, Banaadir Post, News From Somalia. Bookmark the permalink.
Kenya oo weli madaafiic naflacaari ah ku Duqeeynaysa Kismaayo xili ay ku jabtay inay gaarto Kismaayo iyo Xaaladda oo degan.
Cudurka Daacuunka oo Jubbada hoose ku laayay Askar Kenyaati ah